भर्खरै जन्मिएको बच्चाको हेरचाह कसरि गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
भर्खरै जन्मिएको बच्चाको हेरचाह कसरि गर्ने ?
1. शान्त वातावरण
नवजात शिशुको निन्द्रा चाडै खलबलिन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई शान्त ठाउँमा सुताउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सकेसम्म गाडी वा अन्य आवाज नआउने ठाउँ उपयुक्त हुन्छ । साथै प्रदूषणबाट पनि मुक्त राख्नुपर्छ ।
2. आरमपूर्वक सुताउने
भर्खर जन्मिएको बच्चालाई पर्याप्त निन्द्रा चाहिन्छ । उनीहरु एक दिनमा १६ घण्टासम्म आरम गर्न सक्छन् । तर, यत्तिका समयसम्म उनीहरु खाली पेट बस्न सक्दैनन् । तरल पदार्थले पेट भर्नुपर्ने हुँदा बारम्बार भोग लागिरहन्छ ।
जब पेट खाली हुन्छ, उनीहरु ब्यूँझन्छन् ।त्यसैले बच्चालाई स्तनपान गराइरहनुपर्छ । यसका लागि आमाले पोषिलो वा झोलयुक्त खानेकुरा बढी नै सेवन गर्नुपर्छ ।
पहिलो बच्चालाई स्तनपान गराउन कतिका लागि समस्या हुन्छ । अनुभव पनि हुँदैन । बच्चा जन्मिएपछिको २४ घण्टासम्म उनलाई ८ देखि १२ पटकसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ । स्तनपान गराउने आमाले पनि सन्तुलित खाना खानुपर्छ ।
बच्चालाई छातीमा राखेर निप्पललाई ओंठमा स्पर्श गराउनुपर्छ । बच्चाले मुख खोलेपछि विस्तारै स्तन दबाउनुपर्छ । बच्चाले राम्ररी दुध चुस्न सकेन भने विस्तारै अभ्यस्त गराउनु पर्छ ।
4. गुम्साएर नराखौं
जाडोमा बच्चालाई न्यानो राख्नुपर्छ । वाहिरको चिसोले चाडै प्रभावित बनाउने हुँदा बच्चाको कोठाको तापमान मिलाउनुपर्छ । यद्यपी बच्चालाई न्यानो बनाउने चक्करमा धेरै गुम्साएर राख्नु हुँदैन । उनीहरुको छाला एकदमै संवेदनशिल हुने भएकाले वाह्य वातावरणले तुरुन्तै असर गर्न सक्छ ।
५. दिसापिसाब गराउने
जाडोमा भोग लागिरहन्छ । साथै दिसापिसाब पनि गरिरहन्छ । दिसा पिसाब गरेपछि बच्चाको कपडा परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ । एक दिनमा ६-८ वटा डाइपर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिशा गरेको अवस्थामा मनतातो पानी कपासमा डुबाउँदै सफा गरिदिनुपर्छ । बच्चालाई दिनमा केहि घण्टा डायपर बिना नै रहन दिनुपर्छ ।
नवजात शिशुको सरसफाईमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । जाडोमा नुहाइदिन गाह्रो हुन्छ ।
बच्चा जन्मिएको पहिलो साता स्पन्जले बिस्तारै उसको शरीर सफा गरिदिनुपर्छ । एकपटक गर्भनाल निस्किएपछि नियमित रुपले हप्तामा दुई पटक वा तीन पटक नुहाइदिनुपर्छ । नुहाइदिनका लागि तातो पानी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
गर्मीमा यसरी गरौं बच्चाको हेरचाह
जाडो सकिएर बिस्तारै गर्मी मौसम आउँदै छ । मौसम परिवर्तनसँगै यो बेला बच्चाहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यस्तो मौसममा बच्चालाई घमौरा र घाउ-खटिरा आउने, धेरै पसिना आएर चिसो लाग्ने, बढी गर्मीले एलर्जी हुने जस्ता समस्या देखा पर्छ । त्यसैले गर्मीमा बालबालिकाको हेरचाह गर्दा निम्न कुरा ख्याल गर्नुपर्छ |
1.सहज पहिरन लगाइदिने
गर्मीमा बच्चालाई सुती कपडा लगाइदिनु निकै उपयोगी हुन्छ । अन्य कपडाले ताप ग्रहण गर्ने र पोल्ने भएकोले सुतीको लुगाले उनीहरुलाई शीतल र सहज हुन्छ । उनीहरुलाई उकुसमुकुस हुने गरी धेरै कसिलो पहिरन पनि लगाइदिनु हुादैन । यद्यपि घर बाहिर कतै निस्किँदा भने शरीर पूरै ढाक्ने लुगा लगाइदिनुपर्छ ।
2.बेलाबेलामा डाइपर परिवर्तन गर्ने
गर्मी याममा पसिना आएर शरीरमा ब्याक्टेरिया पैदा गर्ने भएकोले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । खासगरी डाइपर निश्चित समयको अन्तरालमा बदल्ने गर्नुपर्छ । तीन घण्टाको अन्तरालमा बदल्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
बच्चालाई डाइपर परिवर्तन गर्दा डाइपरले ढाक्ने भाग राम्ररी सफा गर्नुपर्छ । सुख्खा बनाएर मात्र नयाँ डाइपर लगाइदिनुपर्छ ।
3.झोल पदार्थ खुवाइरहने
गर्मीको मौसममा धेरै पसिना निस्किने भएकाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यसैले दूध चुस्ने उमेरका बच्चाहरुलाई दूध र अन्यलाई झोल पदार्थ बेलाबेलामा खुवाइरहनुपर्छ । गर्मीको समयमा भोक कम लाग्ने भएकाले स्वाभाविक रुपले ठोस कुरा उनीहरु खान रुचाउँदैन । त्यसैले सकेसम्म उनीहरुलाई झोल पदार्थको सेवनमा जोड दिनुपर्छ ।
4.तेलले मालिस नगर्ने
गर्मी याममा बच्चाको शरीरमा तेल लगाइदिनु राम्रो मानिँदैन । यसले एलर्जी हुन सक्छ । तेल लगाएपछि राम्ररी नुहाइदिएन वा सफा गरिदिएन भने छालासम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ । गर्मी भयो भनेर बच्चालाई पूरै शरीरमा पाउडर लगाइदिने कतिपयको बानी हुन्छ । त्यसो पनि गर्नुहुँदैन ।
गर्मीको मौसममा बच्चालाई नियमित रुपमा नुहाइदिनुपर्छ । साँझको समयमा चिसो स्पन्ज बाथ दिने र पछि क्रिम मसाज गर्ने गर्नुपर्छ ।
6.कोठाको तापमान स्थिर राख्ने
बच्चा राख्ने कोठाको तापमान सन्तुलिन राख्नुपर्छ । किनकि तापमानमा परिवर्तन हुँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्छ । यदि कोठामा एसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तापमान २४ डिग्रीमा राख्नुहोस् । यसका साथै कोठा गुम्सिएको हुनुहुँदैन । स्वच्छ हावा आउजाउ गर्ने खुला खालको हुनुपर्छ ।
7.चर्को घाममा बाहिर ननिकाल्ने
दिउँसोको कडा घाम बालबालिकाको लागि राम्रो हुँदैन । चर्को घामले बच्चाको कोमल छालामा सोझै असर गर्छ । त्यसैले चर्को घाममा बच्चालाई बाहिर निकाल्नु हुँदैन । बरु घाम डुबिसकेपछि साँझपख केही समयका लागि उनीहरुलाई बाहिर निकालेर डुलाउन सकिन्छ ।
Don't Miss it स्वस्थ रहन यस्ता छन् २७ प्राकृतिक नियम
Up Next के तपाइलाई पनि ढाड दुख्छ ?
सावधान ! यस्ता छन् आँखा पहेलो हुने कारणहरु, जान्नुहाेस्
मानिसको आँखाले धेरै कुरा बयान गर्छ । व्यक्तिको व्यक्तित्वदेखि उसको मनोभावसमेत आँखामा पढ्न सकिन्छ । यसले स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी पनि…
5 hours ago Pradeep Karki
लगातर हाइ आइराख्नु खतरा हुनसक्छ, यसबारे ख्याल नगर्दा यसरी हुनसक्छ खतरा ! जानिराखाै
सामान्यतया हाई निद्रा नपुगेको खण्डमा आउँने आम जन विश्वास रहँदैं आएको छ । व्यस्त जीवनशैलीले स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न गाह्रो हुन…
फलफुल मानव शरिरमा पाेषक तत्व दिलाउने आहारमा पर्दछ । यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन उब्लब्ध गराउनुको साथै अनुहारमा चमक ल्याउन…
पिसाव पोलेको रोकथामका लागि गरिने केही घरेलु उपायहरु, यस्ता छन्
१. हर्रो बर्रो र अमला चूर्णं एक गिलास पानीमा बेलुका भिजाइ बिहान बिहान सेवन गर्ने गरेमा पनि पिसाव पोल्न कम…
दही खाँदाका फाइदा, यस्ता छन्
–दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रोग तथा पेट सम्वन्धी रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्छ । –दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, तथा गुदाको…
नरिवलको तेलमा कपूरको मिश्रणबाट हुने फाइदाहरु यस प्रकार छन्
– कपाल झर्ने समस्या छ भने त्यसलाई रोक्न नरिवलको तेलमा कपूर मिसाएर मसाज गर्नुस् । – बर्खाको मौसममा गोडाहरूमा फंगस…
दिनको सुरुवात यस्ता खानपान देखी गरे न रोग लाग्छ, न भोक जाग्छ पूरा पढ्नुहोस्
हामी विहान उठेर नास्ता गर्छौं । स्वास्थ्यका लागि नास्ता अनिवार्य मानिन्छ । हुन त कतिपयले बिहानको नास्ता अनुपयुक्त हुने तर्क…